Afọ Juru M Banyere Otu Ọrụ Sị Aga n'Àkwà Ohiri Niger Nke Abụọ --- Obianọ
Gọvanọ Obianọ kwupùtara afọ ojuju ya ahụ oge ọ gara iji anya ya hụ ka ọrụ si aga n'ebe ahụ a na-arụ bụ àkwà ụbọchị Tuzdee. O mere ka a mara na a rụchaa ya bụ àkwà, na ọ ga-enye aka ịkwalite ọnọdụ azụmahịa na ọnọdụ akụnaụba mpaghara ndịda-ọwụwa anyanwụ na ndịda-ndịda anyanwụ ala anyị.
O tòkwazịrị onyeisi ala, bụ Muhammadụ Buharị maka mbọ ọchịchị ya na-agba banyere ya bụ ọrụ, iji hụ na a rụchapụrụ ya, ma gosipụtakwa olile anya o nwere na a ga-arụchapụ ya bụ ọrụ mgbe adịghị anya.
N'okwu nke ya, onyeisi ụlọ ọrụ ngo Julius Berger ji ya bụ ọrụ, bụ maazị Mr Fredrick Wieser, kọwara na ọrụ ahụ dị àgbà atọ, ma mee ka a mara na gọọmenti etiti akwụọla ego dị ijeri Naịra iri atọ, bụ pasenti iri na ise nke ego ọrụ ahụ. O mekwazịrị ka na dịka ọchịchị nọ ugbu a n'ala anyị siri kpebie, na a ga-arụchàpụ ya bụ ọrụ tupuu abalị iri abụọ na asatọ nke ahọ 2022.